Akara Firefox na Mahadum Cuba | Site na Linux
Akara Firefox na Mahadum Cuba
N’ebe a n’ala anyị enwere mahadum akpọrọ UC (Mahadum nke Science Science), na ya na e nwere otu ìgwè nke ụmụ akwụkwọ ndị bụ nnukwu Fans nke Firefox, ụmụ okorobịa ndị a Firefoxmania 🙂
O di nwute na ha na ebe nrụọrụ weebụ bụ nanị maka mahadum netwọk, na ihe mere m chọrọ ịkọrọ ihe ha na-eme ebe a 😉
Ihu ọma, ha na-eme akara ngosi nke Firefox na mpaghara nke campus nke mahadum, m na-ahapụ ụfọdụ foto ebe a:
Kedu ihe ọ dị mma? 😀
Nke a bụ nke mbụ ogbo okokụre na n'ezie anya na-arụpụta, nke ahụ bụ ... nke mbụ na-eme ka logo dị ka ndị dị otú ahụ, ebe ọ bụ na ha na-ama mere "logistics" akụkụ, atụmatụ, wdg M na-ahapụrụ gị ụfọdụ onyonyo nke etu ala ahụ si dị mgbe ịmalite ọrụ a:
Ọ́ gaghị abụ ihe ukwu ma ọ bụrụ na atumatu ndị dị ka ndị a emee na mahadum ndị ọzọ na mba ndị ọzọ? 🙂
Nzaghachi na see okwu - ^
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Aplicaciones » Akara Firefox na Mahadum Cuba
@littlebiggie: Nke ahụ bụ echiche na-eduzi maka ịmepụta akara ngosi ahụ, mgbe m dechara ụdị ahụ iji kụọ osisi nke nwere ike ịmata ya, m na-agba akaebe na enweghị ngwaọrụ na ihe ndọghachi azụ ndị ọzọ, mana hey nwere ọtụtụ ịnụ ọkụ n'obi na ọchịchọ ... anyị ka chọrọ otu ogbo ... aro ọ bụla ma ọ bụ enyemaka ọ bụla na-anabata mgbe niile ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na nke a bụ email m rcorrales@estudiantes.uci.cu
Olileanya na a ga-emecha akara ngosi na iwu niile, agba na ndị ọzọ. Ọ ga-abụ isi iyi nke mpako maka Firefoxmanía, ndị UCI na ndị ọrụ sọftụwia efu na General ebe a na Cuba 😀
Ihe obi uto nwere ikwu okwu n'aka gi ebe a, n'ihi na unu bu ndi a na-aru oru a mara nma ka inwee ike ime ka ezighi ezi mara
hehe ọ bụrụ na anyị bụ ọtụtụ ndị sonyere, ụbọchị ọrụ ọ bụla a na-akpọ oku na blọọgụ obodo ma enwere ndị mmadụ karịa ngwaọrụ hahaha .. echiche mbụ sitere n'aka onye nhazi bụ isi Erick, ọ ji nnukwu akara a .. ekele na ekele maka nnukwu ọrụ ị na-eme na blog ..
Ndi mmadu si na Madrid enyere m aka ime ihe Site na Ubuntu, ndo, site na Linux
ole ka ị na-eji ụgbọ ala
Ọ bụ na mgbe ụfọdụ ha na-ekwu maka ọ bụla Ubuntu bullshit
Ka anyị hụ, na mmepụta nke Ubuntu LTS ọhụrụ abụghị «ehi obula»😉
Echere m bullshit dị ka nke a:
Ibido ahịhịa ahụ echeghị m na ọ dị mma ịme ihe dị ka nke ahụ ... mana hey, ọ dị mma, ọ nwere ike ịmasị mgbe ha mechara ya.
Ihe dị mma ga-abụ iji ala a chọpụtara wee mee ogige ifuru na agba nke firefox, ọ ga-abụrịrị ụdị nke ultra-pro. xD
Zaghachi ka ọ bụrụ Littlebiggie
HAHAHA ee, nsogbu bụ na ha enweghị ego maka okooko osisi, ma ọ bụ karịa pro ngwaọrụ iji rụọ ọrụ ka mma 🙁 ... ọ bụ ezie na ọ dị ka ihe ịtụnanya, ngwaọrụ enweghị ha tools
Daalụ maka ịkwụsị site, na-anabata gị na saịtị 🙂
HADUKEN !! Ana m dabara nke ọma
Zaghachi danilo palomino
@elav. Daalụ maka nnabata ejej ... aka ị maara etu ihe si arụ ọrụ ebe a, ihe niile bụ nsogbu, anaghịkwa m agwa gị ihe anyị gabigara iji bịa ebe a, anyị ga-agba mbọ ịgha ahịhịa anyị ga-ahụ ihe na-egosi na anyị na-eme ndokwa enwere ike ime mana ọ dị mgbagwoju anya akụrụngwa dị ụkọ, mana echegbula na ọ ga-apụta n'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ ọ ga-agwụ.
Ọ ga-amasị m ịkele ndị nchịkwa nke Blog maka nkwalite na nnọchite nke otu ụlọ ọrụ na ndị otu obodo na anyị nwere olile anya n'oge na-adịghị anya ị ga-ekerịta ahụmịhe anyị na Cuba na ndị ọzọ ... ekele ...
Ana m ekwughachi, a na-anabata ntụnye ma ọ bụ enyemaka ọ bụla ...
N'aha ndị admins ahụ, na ndị na - abụghị ndị admins, "Daalụ nke ukwuu" 😀
Eeh, n'akụkụ nke anyị, anyị zuru oke iji nyere Firefoxmanía aka dị ka humanOS ka ụwa niile wee hụ ya, ọ bụ naanị na ịchọrọ ime ya 🙂
Akwa !!! ọ bụ ezie na ahịhịa dara ogbenye !! hehehehe ekwenyere m onye ibe m na ifuru ole na ole iji nye ụda firefox ga-ama mma. You kpọtụrụwo Firefox? ma eleghị anya, ha nwere ike inyere aka na ihe ndị dị mkpa.
Ma olee ezigbo ọrụ ... ma site na Chile m bi Firefoxmanía xD nke m. Daalụ, lee ka Cuba si dị ukwuu. Ezigbo isiokwu.
Ọ bụrụ na m eziokwu, mba, kpọrọ Mba. Kindsdị ihe ndị a bụ omume yiri nke ịrọ òtù, kọntaktị na ndị ọzọ.
Toghara ịsị na “ofufe” nke logos bụ ihe mebiri emebi ma gbaghara ndị na-eme ya (na ndị mere ya).
Ha ga-ekwu ihe ọ bụla gbasara Apple Fans, mana ha onwe ha ma ha eme nke a ma ejiri m n'aka na ụfọdụ Macfan na-eme apụl a bit n'ime ubi, ubi, mural, wdg na ịchị ọchị na ịkwa emo nke ahụ ike uche ha ga-adịgide otu izu. .
@Ares: odika I ghotaghi .. Agam akowa
Ọ bụrụ na ị bụ nke obodo na-emepe ma na-akwalite teknụzụ na-akwụghị ụgwọ, ikike nke ịntanetị, nke na-alụ ọgụ maka ikike gị dị ka onye ọrụ na nnwere onwe gị, n'etiti ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ị na-akpọ na otu ịrọ òtù ma ọ bụ kpọtụrụ n'ihi na maka m ọ dị mma ruo mgbe enweghi Nsogbu, n'ihi na anyị bụ nke otu nnukwu ịrọ òtù na njikọta ọnụ na ụwa ma ọ bụ obodo Mozilla.
N'aka nke ozo, echiche nke ihe okike a abughi ihe obula maka agba nke nkita ohia, pk mozilla enyeghi anyi ma obu gbaa anyi ume ka anyi kee ya ma yabụ anyị ga-enweta uru, echiche na-eduzi ma na-adị Emezuru bụ ịgbasa na mba anyị ebumnuche nke mozilla ntọala na ihe nchọgharị firefox ya, ka a mara na enwere ndị na-arụ ọrụ iji mee ka ịntanetị dị mma kwa ụbọchị ... ekwenyere m na ihe mgbaru ọsọ nke ndị apụl apụl adịghị na-eru nso na nke anyị, ma na-eme ihe ha na-eme maka Nkà na ụzụ ga-abụ nnukwu ntakịrị ntakịrị nke ndị na-akpọ ha otu ahụ ... M na-agwa gị ka ị gụgharịa isiokwu ahụ ma dee ajụjụ ọ bụla ....
PS: Enweela m ike nke logo kemgbe mmalite ya ...
Ee m na-atụ ụjọ na m ghọtara nke ọma.
A nwara m ikwu ihe ụfọdụ dị ka ha dị, karịchaa n'ihi na okwu gị dum (ana m ewere ya n’amaghị ama) dabere na “arụmụka” mmụọ kpamkpam; mana m choro ka mma ka m nwekwuo nsogbu ma zere imebi ihe.
Ndoo ikwu ya, mana ihe ị n’eme ka anakpo mmetuta obi ojoo.
Ọ dị ka ụfọdụ ndị na - enweghị ike ịsị na - ekwu «Ọ bụrụ na anyị na-alụ ọgụ maka nnwere onwe na ikike nke ụmụ anyị, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị, maka nnwere onwe na nchekwa nke mba anyị na ụzọ ndụ, iji chekwaa ụdị ọdịda anyanwụ anyị dị elu na nke mepere anya, maka nnwere onwe na ọchịchị onye kwuo uche ya nke ndị a na-emegbu emegbu bụ ndị a na-adị gbuchapụrụ ndị ọchịchị ha na-achị achị na iji nweta ụwa na-enweghị iyi egwu iyi ọha egwu, ọ bụrụ na ịme ihe niile ahụ bụ mwakpo nke mgbukpọ agbụrụ na nke na-akpasu iwe, mgbe ahụ ee, anyị ji mpako na-egbukpọ ndị mmadụ na ndị na-eme ka ndị mmadụ nweta anyị nwere nnwere onwe na ọchịchị onye kwuo uche ya, nke gị na nke niile ndị mmadụ ».
N'aka nke ọzọ, ekwubeghị m ihe ị na-egosi, nke obodo nke na-eme "ihe ọma na ịdị mma" (nke n'ụzọ ọ bụla okpukpe / ịrọ òtù ọkachasị mgbe onye otu ya hụrụ ya) abụghị ihe ị M kpọrọ òtù nzuzo ma ọ bụ kpọtụrụ, akpọrọ m mee ihe ndi otu di iche iche n'ihe ha mere / mee nke ahụ bụ n'ezie okwu gbasara òtù dị iche iche na kọntaktị.
N'aka nke ozo, echiche banyere ihe okike a abughi ihe obula nke agba nke nkita ohia, ..., echiche nduzi na a na-emezu bu igbasa na mba anyi ebumnuche nke ntọala mozilla. na ihe nchọgharị firefox ya, nke a maara na enwere ndị na-arụ ọrụ iji mee ka ịntanetị dị mma kwa ụbọchị yana iji firefox ha ga-enwere onwe ha na weebụ, na enwere obodo ebe echiche anyị dị.
Lee, ọ bụrụ na m dee okooko osisi na ahịhịa nke ogige «M hụrụ gị n'anya ELENA» ọ bụ n'ihi na m na-nzuzu banyere ya na m na-akpọ isiala nye ya, e nweghị ọzọ.
Ọ bụrụ na m chọrọ igosipụta ikike nke ndị ọrụ netwọkụ, ihe egwu dị na ichere maka teknụzụ a machibidoro ma chịkwaa ya, ụzọ iji lụọ ọgụ ma mezuo ebumnuche ụfọdụ, ana m eme ihe nwere ọgụgụ isi ma dịkwa mma dịka ịhọrọ ịkọwa ma gbasaa echiche ndị ahụ. , ọ bụghị egbugbu nnukwu logo na ala ma gbaa ya gburugburu.
Nke ahụ bụ ihe m (na onye ọ bụla na-adịghị ele mmadụ anya n'ihu) na-akpọ na-eme ihe nzuzo, na-ekwu n'ụzọ enweghị isi ọ dịghị ụzọ isi gbaghaa ya ma ọ bụ na-arụ ụka na nke a bụ ụzọ (dị mkpa ma dị irè) iji "kwalite echiche."
Ekwenyere m na ihe mgbaru ọsọ nke apụl apụl adịghị nso na nke anyị, na ihe ọ bụla ha mere site na nka na ụzụ ga-abụ ntakịrị ntakịrị nke ndị na-akpọ ha n'ụzọ ahụ.
Dị ka onye na-ekwu, ihe mkpali m dị mma, nke ha dị iche na nke m mgbe ahụ mba.
Mkpali m di nma ya mere omume m zuru oke; ihe mkpali ha bu ihe ojoo, ndi na eche onwe ha nke ukwu, ndi ozo, na ihe ndi ozo. Na-ekwu okwu banyere ịrọ òtù.
“Ihe di iche” di n’etiti ndi okpukpere chi na okpukpere chi bu na ha abuo na eme emume, ha abuo na-ekpe ekpere, ha kwenyesiri ike na eziokwu nke ha bu eziokwu zuru uwa dum diri mmadu nile mma, ma okpukperechi bu okpukperechi ”n’ihi na ha na-agbaso echiche m, na-emegide ịrọ òtù ndị na-eso ma na-efe ihe ụgha.
Onye nzuzu apụl onye na-eme otu ihe ahụ ka ị ga-eche na ị na-eme ya n'ihi na ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na Apple kwesịrị ya, ebe ị ga-abụ onye nzuzu na-adịghị ndụ geeks ndị na-eme ihe dị egwu maka ihe dị egwu. Bịanụ, otu ma site n'akụkụ ụzọ gị ma ọ bụrụ na ị ghọtaghị.
M na-agwa gị ka ị gụghachi onwe gị, ma ọ bụ ịchọrọ iwepụta onwe gị dị ka onye na-akwado akụkọ ahụ ma ọ bụ n'ime afọ ole na ole ị ga-ahụ na ndị na-eme nke ahụ bụ nnọọ ihe ijuanya.
Bravo. Ekele gị GPS nzuzu mgbe ị hụrụ ya XD.
Echere m na ọ na-agbanwe ihe.
N'aka ozo, emere akara a dika ihe mpako… anyi (asim anyi n’agbanyeghi na esonyeghi m ime akara a) nwere obi uto iji Firefox, ya mere anyi jiri bulie ya otu ahu. N'iji iji Firefox eme ihe nganga na ịbụ onye na-enweghị uche, ma ọ bụ ịtụnyere ịdị mpako maka nke a ịdị mpako maka iji ihe ọ bụla (Mac) dị iche, enweghị ihe ọ bụla ọ ga - eme otu ihe na ibe ya.
Nke a nwere ike ịbụ esemokwu ogologo oge n'ihi ya maka m ọ dị mma ... ị nwere echiche gị banyere omume ndị a na-eme ma anyị nwere ihe ọzọ ... naanị ihe m kwenyere na gị bụ akụkụ ebe ị na-ekwu na onye ọ bụla na-akwado ha nwere ma na-akatọ ndị ọzọ .. n'ihi na ndị ọzọ na o kwere omume arụmụka m bụ na-agbanwe agbanwe ma, ndị ị na-enye na-dabere na onwe njirisi .. na m ikwugharị ka na-agbalị na-enye gị m si ele ihe anya na ọ bụ ya… ekele maka ikwu….
Enwere m olileanya na ụbọchị ị hụrụ ga-abịa, ị ga-ekwenye m.
Kedu oge ikpeazụ ị jiri nganga na-eyi ihe? I togoola mpako n’ibiri ọkpa ị na-eyi? You bulie ya site na ite ya akara n’elu ala?
Inwe obi uto na ihe banal (dika iyi ihe) bu ibu onye ofufe, obu inwe nkpuru obi nke juputara na ihe mbu kwere omume, ma ebe obu na inwere ihe ojo n’adighi nma, ị chọghị ịmata iru eru ahụ n'ime onwe gị / Gị.
N'ezie, ha achọghị ịmata ya na ọ bụ ya mere ha ji kwado onwe ha "ọ bụ na ihe kpatara anyị dị mma" "anyị chọrọ n'ezie ịnọchite anya ihe ọzọ" (ọ bụ ezie na onye nke ikpeazụ kwetara na ọ bụ maka ebube nke mbụ ).
Dị nganga iji Firefox (*) bụ otu ihe na ị dị mpako iji ihe nkeonwe (Mac). Ha dị iche na ụzọ ụkwụ gị, maka Maquero ọ ga - adịkwa iche n'ihi na ọ ga - abụ "inwe nganga na iyi ihe dị mma yana inwe obi ụtọ na ị na-eyi ihe freaks". Anyị na-alaghachi n'echiche nke ịrọ òtù.
(*) Nke ahụ site n'ụzọ, Firefox abụghị ezigbo Free, yabụ na ọ bụghị ezigbo esemokwu.
Maka arụmụka ndị ọzọ enwere m, ndị ị na-enye dabere na njirisi onwe onye.
Maka m nke gị enwebeghị ya, mana ihe dị iche bụ na enweela m ike ịkọwa ma kwado ihe kpatara enweghị nkwekọ ha na anaghị m anọgide na-ekwu okwu.
N'ezie, edebere m arụmụka ka m wee ghara ịda ụda ma ọ bụ jiri ọtụtụ ederede dee ya.
Oge ikpeazụ? …,, M na-enwe obi ụtọ maka DesdeLinux, Enwere m obi ụtọ iji GNU / Linux, enwere ihe ọjọọ ma ọ bụ ihe na-adịghị mma banyere ya?
Ma mba, esebeghi m akara njiri mara gi n’ala, nihi na enweghim ohere. Enwere m onye na-anụ ọkụ n'obi na enweghị uche na enweghị mgbagha maka ya? nah, echeghị m otú ahụ 🙂
Echere m na ebe a nsogbu niile dị na nkọwa / ihe ọ pụtara na onye ọ bụla nwere "mpako", yana nke "ịnụ ọkụ n'obi" 😀
Apple achọghị ịme ihe ọ bụla, nke ahụ bụ ihe ndị fanboys ya bụ maka ya.
Ndo, ọ bịara ugboro 2….
Ezigara m 2 gaa na ahịhịa.
Onye na-ekele gị 🙂
Echere m na anyị na-aga na njedebe nwụrụ anwụ, yabụ ana m atụ aro ịhapụ isiokwu ahụ ka ọ dị, onye ọ bụla nwere echiche ya na nrube isi anyị na-anụ ọkụ n'obi, dịka mmadụ kwuru gbaghara amaghị m maka amaghị onye kwuru ahịrịokwu ahụ
N'WORLDWA A nke CHIMERAS, Onye ọ bụla na-eri nri…. NA OZỌ HA
.. ekele na ndo ndị adụghị iji mepụta esemokwu a .... ekele.
@Ares you maara ihe? Echetụbeghị m banyere ihe ndị ahụ ị na-ekwu, ha agafeghị uche m. Mana ọ bụrụ na ị ghọtaghị njirisi nke ndị ọzọ, nke a bụ otu maka gị, nke a na-apụghị ịgbagha: Anyị dị njikere ịme ya!
Ọ bụrụkwa na anyị chọrọ ịkọ nri, anyị na-akụ ihe oriri maka ya.
Ok ka anyi nwayo nwayo 🙂
Anyị na-eme nke a ntakịrị, ị chọrọ nnwere onwe? Hà na-agbachitere nnwere onwe? , mgbe ahụ, ha ga-agbachitere nnwere onwe nke onye ọ bụla iji nye echiche ha, ọbụlagodi ịkwanyere ya ùgwù 😉
Ọ bụghị onye ọ bụla ga-ekwenye na otu, n'eziokwu ma ọ bụrụ na ọ dị ka ọ ga-abụ ihe niile na-agwụ ike, mana dịka mmadụ kwuru: «Ekwenyeghị m n'ihe ị na-ekwu, mana m ga-anwụ na-agbachitere ikike gị ikwu ya» ^ _ '
Ọ bụghị onye ọ bụla ga-ekwenye n'otu ihe ahụ, n'eziokwu ma ọ bụrụ na ọ dị otú ahụ ọ ga-abụ ihe niile na-agwụ ike
Mba, ọ bụrụ na mmadụ niile kwenyere m na ụwa a ga-aka mma
Ọ ga-enweghị arụmụka, echiche na-arụpụta, wdg 🙂
Cheta na mgbe echegharịrị ihe, mgbe ị na-ekwenyeghị na ihe ma ọ bụ onye ọ bụla, ọ bụ na ị na-eche maka ịgbanwe ... ugbu a, na mgbanwe ahụ ka mma ma ọ bụ ka njọ, ọ bụ ihe ọzọ else
Ntanetị na ịkekọrịta: igodo abụọ iji rụọ ọrụ nke GNU / Linux
Ubuntu na Android jikota